Iindaba Zomtshato | Eyedwarha 2021
Izimemo zoMtshato zoMtshato eziBonakalayo
Isimemo somtshato sanamhlanje esenzelwe iimilo ezinesibindi ezijolise kwitayile yokudlala okanye kwigolide yodidi.
Izimemo zoMtshato zoMtshato eziMiweyo
Intle kwaye ithambile, esi simemo somtshato sanamhlanje sidibanisa iintyatyambo ezintle kunye nohlaza kunye nejometri yenyuka imigca yegolide emisela iinkcukacha zomtshato wakho.
I-Wave Abstract Wave Enkosi Iimvulophu Zamakhadi
Iimvulophu zeSimemo seBronzi seZimbali
Esi simemo somtshato sanamhlanje sibonisa amagama omtshakazi kunye nomyeni kwifonti entle ebhaliweyo ebhalwe imibala yobhedu etyebileyo ngenkangeleko yentsimbi.
Amagqabi amancinci Izimemo zoMtshato
Esi simemo somtshato esincinci sihonjiswe ngomzekeliso wegqabi elinomtsalane. Ulwazi lusethwe kuhlobo lokuchwetheza oluqhelekileyo, kwaye uyilo luye lwasala lulula ukwenza imbonakalo yanamhlanje, entle.
Iintyatyambo zeBohemian Gcina amaKhadi oMhla
Oku kumangalisa ngokumangalisayo ngokuGcina uMhla kuneempawu zobunewunewu obucekeceke, ubhalo oluntsonkothileyo, kunye neentyatyambo zobufazi zasendle eziqhakaza umbala ophefumlelweyo ngendalo. Entsha, yanamhlanje kunye nothando, iBohemian Floral yenye yeentlobo! Imvelaphi emhlophe eqaqambileyo ngaphambili ihanjiswa ngasemva koyilo.
Izimemo zomtshato ezilula
Esi simemo somtshato sanamhlanje sibandakanya iskripthi esilula, esibhalwe ngesandla esidityaniswe nohlobo olungenantlonelo sans serif.
Izimemo zoMtshato zeFloral Wreath
Hoop yegolide eneentyatyambo eziluhlaza ezingqonge amagama akho kolu loyilo lwesimemo somtshato sase-bohemian.
Izimemo zoMtshato eziQhelekileyo
Isimemo somtshato esincinci kunye nenobuhle esineenkcukacha zakho zomtshato ngokuchasene neziqalo zakho kwiskripthi esihle. Umva woyilo uquka iphethini yee-swirls.
Rustic Vines Izimemo zoMtshato
Ukuvuthwa kwemidiliya yohlobo oluhlaza kungqonge isimemo sakho somtshato kolu luyilo luhle, kubandakanya iipopu ezintle zerusi kunye neentyatyambo zobhedu ezine-eucalyptus kunye ne-lunaria.
Ngokulula nje Gcina iimvulophu zekhadi lomhla
Amakhadi eRustic Birch Indawo
Eli khadi lisongiweyo le-3.5 'x 2.5' libonisa igama lendwendwe ngalinye eligunyaziswe yimithi yeebirch yasebusika.
Isimemo somtshato esitshixwayo
Isimemo somtshato sanamhlanje esinamaza amibalabala, ulungele umtshato wakho wolwandle.
Iimpawu zeeMemo zoMtshato eziBlue
Isimemo esihle somtshato sanamhlanje esineentyatyambo ezithambileyo, eziluhlaza okwesibhakabhaka. Uyilo luqhayisa ngobeko olucocekileyo, olulungelelanisiweyo nomxube weefonti zale mihla. Umva wekhadi ubonakalisa umxhasi onombala oluhlaza.
Amakhadi okuphendula oMtshato oMdaka ongathathi cala
Ikhadi lokuphendula lomtshato elilula kwaye linobuhle libonisa ii-watercolor accents ezimbalini. Olu seto luyancoma iphalethi yomtshato engathathi hlangothi kunye nesilumko, indlovu, kunye nomdaka, kunye neepops zomhlaba weetoni ezinje nge-mustard, i-rose enothuli kunye ne-beige efudumeleyo.
Izimemo zomtshato omncinci weChic
Esi simemo simangalisayo sibonisa ubuchwephesha obomeleleyo ngemibala yale mihla kunye nee-engile zebhloko ezingabonakaliyo.
Indawo entle yeOasis Gcina iiPostcards zomhla
Imibala ugcina umhla weposikhadi kunye neentyatyambo zasentlango kunye nee-succulents ngegolide calligraphy kunye neempawu zomzimba ezintle.
Iinkqubo zoMtshato zoGcino oluDala
Amasebe aluhlaza amnandi ahombisa iinkcukacha zomtshato wakho kule nkqubo yomtshato.
Izimemo zoMtshato eziMangalisayo
Isimemo esimangalisayo somtshato esingaqhelekanga kunye nezinto zoyilo zomhlaba kunye nokwahluka okuhle kwale mihla kweefonti ezisesikweni.
Isimbali seentyatyambo Ifoto Gcina amaKhadi oMhla
Yabelana ngesithombe sakho sokuzibandakanya kwaye ukhumbuze iindwendwe ukugcina umhla ngalo mtshato mhle ugcine umhla.
Isipho seminyaka esi-6 somtshato
phrinta kwizimemo zomtshato wasekhaya
uyilo lwebar yendlu
Utata wezipho zomyeni
izimvo ezintsha ze-bachelor party england
unxiba njani iringi yomtshato?
I-avareji yeendleko zokubandakanya umsesane 2020